SAWIRRO: 12 sawir oo muujinaya sida ay iskugu fiicnaayeen Merkel & Obama iyo sida ay isugu wareersan yihiin Trump | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka SAWIRRO: 12 sawir oo muujinaya sida ay iskugu fiicnaayeen Merkel & Obama...
SAWIRRO: 12 sawir oo muujinaya sida ay iskugu fiicnaayeen Merkel & Obama iyo sida ay isugu wareersan yihiin Trump
(Berlin) 16 Luulyo 2018 – Kulan madaxeedkii NATO ee Brussels ayaa markale shaashadaha kusoo celiyay madmadoowga ku jira xiriirka madaxwayne Donald Trump iyo Chancellor-ka Jarmanka ee Angela Merkel.
Sanad iyo barkii lasoo dhaafay wuxuu Trump si joogto ah u weerarayay Jarmanka oo uu ku eedaynayay inaysan qoondadooda ka bixin qaaraanka NATO iyo in aysan cadaalad ka ahayn ganacsiga ay la wadagaan Maraykanka, taasoo ka caraysiisey Merkel.
“Germany waxaa gebi ahaanba xukuma Ruushka, waayo waxay dalkaa ka helaan 60-70% tamarta ay isticmaalaan,” ayuu yiri Trump kaddib shirkii NATO, taasoo xaaladda uga sii dartay.
Haddaba, waxaannu idiin haynaa 11 sawir oo muujinaya sida ay isu fahmi jireen oo iskugu fiicnaayeen Merkel iyo madaxwaynihii hore ee Barack Obama iyo sida ay u kala fog yihiin isuna fahmi la’yihiin Trump.
Previous articleMAQAL & MUUQAAL: Taageerayaal xamaasadaysan oo Ronaldo J Medical kusoo dhoweeyay
Next articleSAWIRRO: SSC Napoli oo dhisanaysa xero tababar oo leh aalado cajiib ah! (Qolal bilaa cufis-jiidad ah oo ku jira)